Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 243309 times)
« Reply #530 on: August 22, 2011, 02:29:24 PM »
" လူ ကြီး လူ ကောင်း "
အင်္ဂလိပ် ၊ ပြင်သစ် ၊ ရုရှားတို့ ကို ခေါင်း သုံးလုံးပါသော နဂါးကြီးက ဖမ်းမိပြီး
" မင်းတို့ ကို ငါ အခု စားမယ်..၊ မစားခင် မင်းတို့ ကို အခွင့်အရေး တစ်ခု
ပေးမယ်..၊ ဆိုကြပါစို့ ... အလုပ်ကနေ အချိန်စောပြီး မင်းတို့အိမ်ကို ပြန်
ရောက်လာတယ်..၊ အိပ်ရာထဲမှာ မင်း မိန်းမနဲ့လင်ငယ်ကို ပက်ပင်းတွေ့ 
တယ်..။ မင်းတို့ဘာလုပ်မလဲ..။ မင်းတို့ ပေးတဲ့အဖြေကြောင့် ငါ့ ခေါင်း
သုံးလုံးစလုံး ရယ်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ့အဖြေ ပေးတဲ့လူကို မစားဘဲ လွှတ်ပေး
မယ်...။ သဘောပေါက်ကြရဲ့ လား... "
" သဘောပေါက်ပါတယ်... "
ပထမဦးဆုံး အင်္ဂလိပ် ထွက်လာပြီး ပြောသည် ။
" ကျနော်က လူကြီးလူကောင်း ပီပီ ဆူညံဆူညံ ဘာမှ မလုပ်ဘူး..။ " သူငယ်ချင်း
နည်းနည်းရွှေ့ စမ်း....ငါလည်း လှဲချင်တယ် " လို့ ပြောလိုက်မယ် "
နဂါး ခေါင်းတစ်လုံးတည်း ရယ်သည် ။ ပြင်သစ်က ပြောသည် ။
" ကျနော်ကလည်း လူကြီးလူကောင်း ပီပီ ဘာမှ မပြောဘဲ အိမ်ပြင်ကို ထွက်မယ်
ကျနော့် မယားငယ်ကို အ်ိမ်ခေါ်လာပြီး စောစောက စုံတွဲအနားမှာ လှဲလိုက်မယ် "
နဂါး ခေါင်းနှစ်လုံး ရယ်သည် ။ ရုရှား အီဗန် ထွက်လာသည် ။ စုပေါင်း ကာယလုပ်သား
ဖြစ်သဖြင့် တစ်ကိုယ်လုံး ညစ်ပတ်ပေရေနေသည် ။ ခေါင်းပေါ်က ဆောင်းဦးထုပ်သည် အရောင်ပင်
မပေါ်တော့ချေ..။ ၄င်းက ပြောသည် ။
" ကျနော်က လူကြီးလူကောင်း မဟုတ်လား.. အဲ့ဒီတော့... "
ဤစကားကို ကြားသည်နှင့် နဂါးခေါင်း သုံးလုံးစလုံး အားရပါးရ ရယ်လေသည် ။
« Reply #531 on: August 22, 2011, 02:41:31 PM »
" ဆုံး မ မယ် "
တစ်ဖက်ခြံမှ ပျားမွေးမြူသူ ကိုဘမောင်ကို အန်တီမြက ပြောသည် ။
" ရှင့် ပျားတစ်ကောင် ကျမကို တုတ်သွားတယ်ရှင့်. "
" ဟုတ်လား... ဘယ်အကောင်လဲ... ကျနော့်ကို ပြ.. ဒီကောင့်ကို
ကျနော် ကောင်းကောင်း ဆုံမမယ်.... "
" အိပ် မ ပျော် သော ည "
တည်းခိုခန်း ပိုင်ရှင်က ဧည့်သည်ကို မေးသည် ။
" ညက ကောင်းကောင်း အိပ်ရရဲ့ လား..ခင်ဗျာ.. "
" မမေးရင် ပိုကေင်းမယ် ၊ အိပ်ရာထဲမှာ ကြမ်းပိုးအသေ တစ်ကောင် တွေ့ ရတယ်.. "
" အသေ တစ်ကောင်လောက်နဲ့ဒီလောက်တောင် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရလားဗျာ.. "
" အသုဘ လိုက်ပို့ တဲ့ သူ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကို မြင်ရင် ခင်ဗျား ဒီစကာမျိုး ပြောမှာ
« Reply #532 on: August 22, 2011, 03:39:12 PM »
" တံ ခါး ဖွင့် ပေး မယ် "
ချူချာများနေထိုင်သည့်ရွာသို့ရုရှား.အီဗန် ရောက်လာသည် ။ ရောက်သည့်နေတွင်ပင်
အရက်မူးပြီး ချူချာများကို ငထုံတွေ..ငအတွေ ဟု စော်စော်ကားကား အော်ဟစ် ပြောဆိုသဖြင့် ၄င်း
ကို အခန်း တစ်ခုထဲတွင် ချုပ်ထားရန် အမိန့် ပေးလိုက်သည် ။ အစောင့် တစ်ယောက်ကိုလည်း အ
ခန်းရှေ့ တွင် ချထားလိုက်သည် ။
ခဏကြာသောအခါ အီဗန်က အခန်းထဲမှနေ၍ တံခါးကို ထုပြီး မိမိ အလွန်ဆာသဖြင့် ပေါင်
မုန့် တစ်လုံး သွားဝယ်ပေးစေလိုကြောင်း အစောင့်ချူချာကို ပြောသည် ။ ကိုပက် ၅၀ အကြွေစေ့
တစ်စေ့ကိုလည်း ပစ်ပေးလိုက်သည် ။ အစောင့်ချူချာ ပိုက်ဆံကို ကောက်ယူပြီး ပေါင်မုန့်ဝယ်ရန်
ထွက်သွားသည် ။ ဤအချိန်တွင် ပြတင်းပေါက်ကို ကျော်ပြီး အီဗန် ထွက်သွားသည် ။
သို့ သော် မကြခင်မှာပင် ရွာသားများ ၄င်းကို ပြန်မိလာပြီး အချုပ်ခန်းထဲ ပြန်ထည့်ထားလိုက်
သည် ။ ဤအခေါက်တွင် ပိုမို သွက်လက် ချက်ချာသော အစောင့်တစ်ယောက်ကို ချထားလိုက်သည် ။
အချိန်အနည်းငယ် ကြာသွားသည် ။ အီဗန် တံခါးကို ထုပြီး ပြောသည် ။
" ဟေ့....ချူချာ ငါ အင်မတန် ဆာတယ်ကွ.. င့ါကို ပေါင်မုန့် တစ်လုံး သွားဝယ်ပေးစမ်းပါ "
" မင်းတို့ရုရှားတွေ အင်မတန် ဉာဏ်များတယ်.. မ၀ယ်ပေးနိုင်ဘူး..ဆာရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်
« Reply #533 on: August 22, 2011, 03:51:14 PM »
" လူ ပြက် "
လူငယ်နှင့် အမျိုးသမီးတို့မိတ်ဆွေဖြစ်သွားကြသည် ။ တစ်နေရာရာတွင် ချိန်းတွေ့ ကြရန်
ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည် ။ ခက်သည်မှာ နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်`၌ တယ်လီဖုန်း မရှိခြင်း ဖြစ်သည် ။
လူငယ်က ဤသို့အကြံပြုသည် ။
" ဆပ်ကပ်ရုံကို ဖုန်းဆက် ...အဲ့ဒီမှာ ကိုယ်က လူပြက်အဖြစ်နဲ့အလုပ် လုပ်နေတယ် "
" ရှင့်ကို ခေါ်ပေးဖို့ဘယ်လို ပြောရမလဲ "
" အားလုံးကို မျက်လှည့်ပြနေတဲ့သူ ကို ခေါ်ပေးပါလို့ပြော....ခေါ်ပေးကြလိမ့်မယ် "
နောက်တစ်နေ့ တွင် အမျိုးသမီးသည် လမ်းဘေးတယ်လီဖုန်းရုံမှနေ၍ လူငယ်ပေးထားသော
ဆပ်ကပ်ရုံ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကို လှည့်သည် ။ ဖြစ်ချင်တော့ ဆပ်ကပ်ရုံသို့မရောက်ဘဲ ကွန်မြူနစ်ပါတီ
ဗဟိုကော်မတီဌာနချုပ်သို့ရောက်သွားသည် ။
နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး မိုလိုတော့ တယ်လီဖုန်းကို ကောက်ကိုင်ပြီး မေးသည် ။
" ဘယ်သူနဲ့စကားပြောချင်လို့ ပါလဲ.. "
" လူတကာကို မျက်လှည့်ပြတဲ့သူနဲ့စကားပြောပါရစေ.. "
တယ်လီဖုန်းကို စတာလင် ဘက် ကမ်းပေးပြီး မိုလိုတော့ က ပြောသည် ။
" ရဲဘော် စတာလင် ခင်ဗျားအတွက် ဖုန်း "
« Last Edit: August 22, 2011, 03:53:14 PM by tunaye2011 »
« Reply #534 on: August 22, 2011, 04:02:05 PM »
" အ ချစ် က လေး "
မော်စကို ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အပြီး ကရင်မလင် နန်းတော်တွင် ပြုလုပ်သော
ဧည့်ခံပွဲ`၌ နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ဘရစ်ဂျစ် ဘားဒေါ့က ဘရက်ဇညက် ကို
" သွားချင်တဲ့သူတွေ သွားနိုင်အောင် နယ်စပ်ကို ဖွင့်ပေးလိုက်ပါလားရှင် "
ဘရက်ဇညက် က လက်ညှိုးဖြင့် သူမကို ချစ်စနိုး ခြိမ်းခြောက်ဟန် ပြုပြီး
" ဘာလဲ...အချစ်ကလေးနဲ့အစ်ကိုကြီးနဲ့နှစ်ယောက်ထဲ နေချင်လို့ လား.. "
« Reply #535 on: August 23, 2011, 12:24:37 PM »
" ကြို ဆို ခြင်း "
အရှေ့ ဥရောပ ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတစ်ခုသို့ဘရက်ဇညက် အလည်ရောက်လာရာ
လေဆိပ်တွင် အမြောက်များဖြင့် ပစ်ဖောက်ကြိုဆိုသည် ။
ဒုတိယ အကြိမ် ပစ်ဖောက်သောအခါ အဘွားအို တစ်ဦးက ရဲသားကို မေးသည် ။
" ဘာဖြစ်လို့သေနတ်တွေနဲ့ပစ်နေရတာလဲ ဟင် "
" ဘရက်ဇညက် ရောက်လာလို့"
" ဘာလဲ... ပထမ တစ်ချက်ထဲနဲ့မှန်အောင် မပစ်နိုင်ဘူးတဲ့လား.. "
" မေ တ္တာ "
မော်စကိုမြို့ တွင် ဖြစ်သည် ။ အဆောက်အဦးတစ်ခုပေါ်မှ အုတ်ခဲတစ်လုံး ကျလာရာ
လမ်းသွားလမ်းလာ တစ်ဦး၏ ခေါင်းပေါ် တည့်တည့်ကျသည် ။ ရသော ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်သဖြင့် ပွဲ
ချင်းပြီး သေဆုံးသွားသည် ။ လူများ ၀ိုင်းလာကြပြီး မကျေမနပ် ပြောကြသည် ။
" လမ်းတောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် လျှောက်လို့မရတော့ဘူး..။ အုတ်ခဲတွေ လူ့ ခေါင်းပေါ်
ကျသတဲ့...။ ဟင်း...တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ ဒီအတိုင်း လက်ပိုက် ကြည့်နေကြတော့မှာလား "
လူအုပ်ထဲမှ တစ်ယောက်က သေသူအား ငုံ့ ကြည့်ပြီးပြောသည် ။
" ကျနော် သူ့ ကို သိတယ်...၊ သူက ကွန်မြူနစ်ပါတီဌာနချုပ်က ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ပဲဗျ "
လူအုပ်ကြားမှ မကျေနပ်သံ ပို၍ ကျယ်လောင်စွာ ထွက်ပေါ်လာသည် ။
" ဒီ ပါတီဝန်ထမ်းဆိုတဲ့ လူတွေ လွန်ကို လွန်လွန်းတယ်.. ဘယ်သွားသွား သူတို့ ချည်းပဲ..အခုပဲ
ကြည့်... အုတ်ခဲတောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကျဖို့နေရာ မရှိဘူး... "
« Reply #536 on: August 23, 2011, 12:34:00 PM »
" အ ကြောင်း အ ရင်း "
" တရားသူကြီးမင်း ခင်ဗျား....ကျနော့်ကို မိန်းမနဲ့ကွာရှင်းခွင့်ပြုပါ "
" ဘာအကြောင်းကြောင့်လဲ "
" အရင်တုန်းကဆိုရင် ကျနော် အလုပ်က ပြန်လာတာနဲ့အိမ်မှာ မွေးထားတဲ့
ခွေးက ဟောင်ပြီး ကြိုတယ်...မိန်းမက အိမ်တွင်းစီး ဖိနပ် လာချပေးတယ်..
အခုတော့ ပြောင်းပြန် ဖြစ်နေလို့ ပါ "
" မောင့် ကို သေ စေ ညွှန်း ရော့ သ လား "
" ခင်ဗျား ယောင်္ကျားဟာ သူ့ ကိုယ်သူ ဘယ်လို သတ်သေလိုက်သလဲ "
" ဒီလိုပါ...ကျမ ယောင်္ကျားဟာ သူ့ ကိုယ်သူ သတ်သေမယ်လို့အမြဲတမ်း
ကျမကို ခြိမ်းခြောက်တယ်..။ ဒါနဲ့တစ်နေ့ မှာ သူ့ ကို ကျီစယ်ချင်တာနဲ့ 
ခြောက်လုံးပြူးထဲ ကျမ ကျည်ဆံ ထည့်ထားလိုက်တယ်. "
« Reply #537 on: August 23, 2011, 12:47:07 PM »
" ကြောင် လာ ပြီ "
ညအချိန်မတော် ယောင်္ကျားကို မိန်းမက နှိုးသည် ။
" ကိုဘမောင်...ကုတင်အောက်မှာ ကြွက်တွေ သောင်းကျန်းနေတယ် ရှင့် "
" အဲ့ဒါ ဘာဖြစ်သလဲ. "
" ဘာဖြစ်ရမလဲ...တစ်ခုခုတော့ လုပ်မှပေါ့ "
" ညောင်...ညောင် "
" ဘယ် လို သ မက် ပါ လိမ့် "
လူခေါ် ခေါင်းလောင်းသံ မြည်လာသည် ။ ကိုဘမောင် တံခါး ထဖွင့်သည် ။
ယောက္ခမ( အမ ) ရပ်နေသည်ကို တွေ့ ရသည် ။
" အမေ...ကျနော်တို့ ဆီမှာ ဘယ်လောက် ကြာကြာနေမလဲဟင် "
" မင်းတို့ငါ့ကို မငြီးငွေ့မချင်း ဆိုပါတော့ကွယ်.. "
" ဘာလဲ...ကော်ဖီတောင် မသောက်တော့ဘူးလား..... "
« Reply #538 on: August 26, 2011, 01:42:52 PM »
" ရေ ကူး ဆိပ် မှာ "
ကိုချူချာ အဖော်များနှင့် ရေကူးဆိပ်သို့လိုက်လာသည် ။ ရေထဲမဆင်းခင် မိတ်ဆွေများက
ကိုချူချာကို သတိပေးသည် ။
" မင်း ရေငုတ်တော့မယ် ဆိုရင် ငုတ်ပြီ လို့အော်....။ အဲ .. ရေနစ်တယ် ဆိုရင်တော့
နစ်ပြီလို့အော်...ကြားလား...."
" ကောင်းပါပြီ "
ရေဆင်းကူးကြသည် ။ ရေ ကောင်းကောင်း ကူးတတ်သူ မဟုတ် ၍ ကမ်းနှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်း
တွင် ကိုချူချာ ရေနစ်သည် ။ သို့ သော် အော်ရမည့် စကားကို မေ့သွားသည် ။ သို့ နှင့် ငုတ်ပြီ ဟု အော်
သည် ။ မည်သူမျှ ဂရုမစိုက်ကြချေ ။ ရေထဲမှ နောက်တစ်ကြိမ် ပေါ်လာသောအခါ ငုတ်ပြီ ဟု အော်ပြန်သည်။
ဘယ်သူမှ လာမကူချေ ။ နောက်တစ်ကြိမ် ရေထဲမှ ပေါ်လာသောအခါ ကိုချူချာ ရှိသမျှ အားနှင့် အော်သည် ။
" နောက်ဆုံးအကြိမ် ငုတ် ပြီ "
« Reply #539 on: August 26, 2011, 02:13:15 PM »
" ကံ ကောင်း လို့မ သေ တယ် "
လူ့ ဘ၀ကို ကိုချူချာ ငြီးငွေ့ လာသည် ။ သို့ နှင့် မိမိကိုယ် မိမိ သတ်သေရန်
ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။ မြစ်ကမ်းစပ်က သစ်ပင်ကြီးပေါ်တက်ပြီး ကြိုးချည်သည် ။ ကြိုးကွင်း
ကို မိမိ၏ လည်ပင်းတွင် စွပ်လိုက်သည် ။ ထို့ နောက် ခုန်ချသည် ။ ကြိုးပြတ်ပြီး မြစ်ထဲ ကား
ယား ကျသည် ။ ၄င်းကို အနားမှ လူများက ကယ်ရသည် ။ ကိုချူချာ ရေမကူးတတ်သော
ကြောင့် ဖြစ်သည် ။
" ဟေ့ ကိုချူချာ....ခင်ဗျား ဘယ်လို လုပ်တာလဲ "
" သွားကြစမ်းပါဗျာ ... ဒီကြိုးကြောင့် ကံကောင်းလို့ရေနစ်မသေတယ်. "